lundi, 04 janvier 2016 21:21
Andramena tao Antalaha : Nisy nisandoka ny filoha lefitry ny Anterimieram-pirenena Mahazoasy Freddie
Nanadio tena ny filoha lefitry ny Anterimieram-pirenena ho an’ny faritanin’ Antsiranana, Mahazoasy Freddie, mikasika ny raharaha andramena sy fakana volabe tamina mpandraharaha tany Antalaha ka nahavoatonona ny anarany taorian’ny nisamboran’ny zandary olona efatra nandeha fiaramanidina manokana niala teto Antananarivo, tonga tany Antalaha ary nitonona ho mpanolotsainy manokana.
lundi, 04 janvier 2016 08:19
Notapahina vonjy maika ny làlana midina avy eny amin'ny tonelina Ambanidia hatreny Ambohijatovo, omaly, hanatontosan'ny mpamonjy aina ny fanapahana ireo ratsan-kazo vaventy teo amin'ny kianjan'Ambohijatovo. Marihina moa fa efa nandratra mpandeha izany trangan-javatra izany tamin'ny fiandohan'ny taona teo.
Fizarana sakafo kianjan'Ambohijatovo
mercredi, 30 décembre 2015 18:58
Kianjan’Ambohijatovo : Fanomezana sakafo ho an'ireo sahirana ara-pivelomana
Nampifalifaly sy nampisakafo ireo olona sahirana ara-pivelomana sy tsy manan-kialofana eo Analakely, Ambohijatovo, Isoraka, Antaninarenina sy ny manodidina ny avy eo anivon’ny Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra ny alarobia 30 desambra 2015.
mercredi, 30 décembre 2015 16:17
Ankazomanga : Trano iray noravan’ny mpitandro filaminana
Tonga nandrava trano tetsy amin’ny fokontanin’Ankazomanga indray ny mpitandro ny filaminana io maraina io. Tsy nampahafantatra ny topontrano akory ireto farany fa tonga dia niditra ary nampiasa hery namoahana ny entana rehetra. Tsy nahazaka ny tsindry sy ny fanaparam-pahefana natao taminy ny topontrano izay tsy iza fa ny sefo fokontanin’Ankazomanga ka torana. Nentina vonjimaika teny amin’ny hopitaly ity farany.
VONA Vovonan'ny Olon-dehibe Katolika
samedi, 26 décembre 2015 21:35
Fivoriamben'ny Vovonan'ny Olon-dehibe Katolika Diosezin'Antananarivo
Natao tao amin'ny Fiangonana Katolika Ambohipo ny asabotsy 26 desambra ny fivoriamben'ireo fikambanana miandraikitra ny olon-dehibe lahy sy vavy eto amin'ny Diosezin'Antananarivo. Nanaovana ny tatitra sy ny jery todika tamin'ny asa vita, ary nametrahana ny sahan'asa ho atao. Nofidiana tamin'izany ireo birao vaovao hiandraikitra ny VONA eto amin'ny Diosezy.
mardi, 15 décembre 2015 03:32
Malaza ratsy ny fitondrana Hvm
Mandindondindona ity fanjakana ity ankehitriny ny firodanana. Amin’ny tonon’andro fety toy izao dia ny filaminana sy ny fifampirariana soa no ataon’ny Malagasy izay fatra-pandala ny fihavanana. Mampanahy be ihany anefa ny toe-java-misy satria vao miandoha ny herinandro dia fanakianana mivaivay momba ity fitondrana ity sy ny afitsoky ny fianakavian’ny mpitondra fanjakana no renao sy hitanao amin’ny haino aman-jery samihafa eto an-drenivohitra ka misy amin’ireo haino aman-jery toy ny radio Antsiva nandritra ny fotoam-baovaony androany ohatra izay nangata-panazavana amin’ny Filoham-pirenena momba ny fanakianana maro mahazo ny fianakaviany.
jeudi, 10 décembre 2015 15:08
Fiakaran'ny rano nahafatesana olona
Lehilahy iray hita faty teny amin'ny faritr'i Besarety ary roa ambiny mbola karohina .Tranga efa fahita matetika eny amin’iny faritra iny ny toy izao araky ny filazan’ny mponina eny ,matetika olona sendra mody amin’ny alina no voakasik’izao ,tokony hosaromana ny dalle izay fototry ny loza hoy ireo mponina eny. Tao anatin’izany fiakaran’ny rano izany ihany dia vehivavy iray tokony ho 35 taona eo ho eo ihany koa no maty teny Ampandrana antsinanana raha izy nandeha namonjy fodiana iny tokony ho tamin’ny valo ora sy sasany alina, izay tsy maintsy mandalo tetezana tsy misy haro-fanina ireny.
Mitohy ny fitokonan’ny mpiasan’ny Croua
Tapitra omaly ny 48 ora nomen’ny mpiasan’ny Croua ny fanjakana handoavana ny karama volana novambra an’izy ireo. Hatreto mbola tsy miroso amin’izany fandoavana karama izany ireo tompon’andraikitra. Tezitra ny mpiasa ka nandray fepetra ny hanoy ny fitokonana.Ny maraina teo dia nanao fanakanan-dalana ny mpiasan’ny Croua. Maro ihany koa ireo mpianatra no nidina nanampy ny laharana. Ny Tale jeneralin’ny Croua dia efa nanao fanambarana tamin’ny fahitalavitra fa efa vonona ao ny vola andoavana ny karama saingy mbola miandry fandaminana. Etsy ankilany kosa ny mpiasa, tsy hitsahatra ny fitokonana raha tsy voaray ny vola. Nitsoka kiririoka sy nihorakoraka nanoloana ny biraon'ny Croua ny mpiasa ary nanao fanakanan-dalana teny Ankatso.
mardi, 08 décembre 2015 13:47
Mpiasan’ny Croua : fitokonana 48 ora
Nivory teo amin’ny biraon’ny Croua teny Ankatso ireo mpiasan’ny sampan-draharaha ny Croua eo anivon'ny Université an'Antananarivo. Nitaraina noho ny tsy mbola nandraisana ny tambin-karama ny volana novambra teo izy ireo. « Ny faha 20 ny volana no fandraisana karama nefa mbola tsy nandray izany izahay hatramin’izao. Noana izahay, tsy manam-bola ka tsy afaky ny hiasa » hoy Marie Louisette Ralalasoa, mpiasan’ny Croua.
vendredi, 04 décembre 2015 16:37
Ny foibe fanabeazana HARDI dia mikarakara lanonana izay natao tetsy amin’ny fokontany Manarintsoa Isotry, izany dia tafiditra ao anatin’ny hetsika fikarakarana fanaovana kopia. Maro ireo zava-kendrena raha ny eto amin’ity ivontoerana ity no jerena, raha tsy hilaza afa-tsy ny fandraisana ireo ankizy vaovao maherin’ny 200 eo, ary hezahina ny hampidirana azy ireo eny amin’ny sekolim-panjakana.